Shina vita amin'ny vera vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodana vita amin'ny vy Door Kinzon30 ary mpamatsy | Kinzon
Varavarana amam-baravarana vita amin'ny vera-Kinzon30 dia voapetaka ary efa nandalo rivotra, fitaterana teboka ary fiatraikany. Ny mombamomba ny aluminium sy ny mekanika fanodinana sy fanokafana ny varavarana fametahana fitaratra vita amin'ny vera-Kinzon30 dia vita amin'ny fitaovana miovaova toetr'andro. Varavarana amorom-baravarana vita amin'ny vera-Kinzon30 dia manana vidiny vokatra mandritra ny 10 taona.
Varavarana amam-baravarana vita amin'ny vera-Kinzon30
Ny takelaky ny vavahadin'ny vera tsy misy fotona-Kinzon30 dia vita amin'ny vera fiarovana mafy. Ny varavarana amorom-baravarana fitaratra-Kinzon30 dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny CE voafetra / PSB any Singapore / Gost any Rosia.
tsy miorim-paka amin'ny lafiny mitsangana ary ny rindrina fitaratra tsirairay dia afaka misokatra tsirairay ho an'ny fanadiovana mora, rivotra madio sy tara-masoandro mavo ary mifarana amin'ny fomba fijery mangarahara.
Ny mombamomba ny fanonerana eo amin'ny tampony dia afaka manitsy ny elanelana eo anelanelan'ny varavarankely sy ny valin-drihana mba hahatonga ny rafitra mitsivalana.
roa karazana fanitsiana kiraro, iray hampiakarana ny mombamomba ny onitra, ny iray hafa hampidina ny mombamomba ny onitra.
kodiarana lehibe mitondra kodiarana lehibe dia afaka manohana ny lanjan'ny mihoatra ny 100KGS ho an'ny takelaka fitaratra ary manamboatra moramora fitaratra
Tsy mitsambikina mihitsy ny Rollers:
miaraka amin'ny ampahany plastika manohana, ny takelaka fitaratra dia afaka mihetsika tsara na dia mandalo ao amin'ny lavaka fivoahana aza ary tsy mitsambikina mihitsy ireo rollers.
Ny varavarana amorom-baravarana tsy misy fotaka-Kinzon30 dia mampiasa SS304 ho an'ny famaky goavambe rehetra hanohanana takelaka fitaratra lehibe.
Tsy afa-maina ireo takelaka:
Ny fio-by fanohanana manokana eo amin'ny lalana tery dia afaka misoroka ireo takelaka fitaratra tsy milahatra rehefa misokatra.
Ny halavan'ny max dia 900mm ary ny haavon'ny max dia 3000mm isaky ny takelaka fitaratra.
Ampiasao ny satroka fiarovana plastika nylon amin'ny mombamomba ny fitaratra mba hialana amin'ny loza ary ny endriky ny tohatra tohatra dia mety hahatratra ny tombo-kase tsara kokoa ho an'ny rafitra.
Fanisiana tombo-kase tsara kokoa:
Varavarana amorom-baravarana vita amin'ny vera-Kinzon30 dia tsy misy elanelana misy ny mombamomba ny lalana sy ny mombamomba ny fitaratra miaraka amin'ny singa manokana.
Previous: Door Kinzon30plus Frameless Glass
Manaraka: Vendrina vita amin'ny varavarankely aluminiary mora ampiasaina Ares50
Door Kinzon30plus Frameless Glass